Arsenal oo shaacisay xiddigaha ku tartami doona abaal-marinta laacibka bisha Agoosto ee kooxda… (Yaa isugu soo haray?) – Gool FM
(London) 04 Sebt 2019. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa xaqiijisay xiddigaha ku tartami doona abaal-marinta xiddiga kooxda ugu wanaagsanaa bishii dhammaatay ee Agoosto.
Gunners ayaa shaacisay afarta ciyaaryahan ee isugu soo haray abaal-marinta laacibka bisha Agoosto, kaasoo ku guuleysan doona abaal-marintii ugu horreeysay ee xilli ciyaareedkan 2019-20 lagu bixiyo garoonka Emirates.
Afarta ciyaaryahan ee isugu soo haray abaal-marinta xiddiga bisha kooxda Arsenal ayaa waxa ay kala yihiin; Pierre-Emerick Aubameyang, Joe Willock, Dani Ceballos iyo Matteo Guendouzi.
>- Aubameyang ayaa bandhig cajiib ah sameeyey xilli ciyaareedkan bilowga ah, iyadoo xiddiga xulka qaranka Gabon uu dhaliyey goolka qura oo ay guusha uga qaateen Newcastle, sidoo kale uu bartilmaameed kulankii ay ka horjeedeen Burnely, halka uu caawin sameeyey kulankii ay guuldarrada ka soo qaateen Anfield.
>- Joe Willock ayaa ka mid ah xiddigaha u sharraxan abaal-marinta laacibka bisha kaddib qaab ciyaareedkii cajiibka ahaa ee uu ku soo bandhigay khadka dhexe intii lagu guda jiray bishaas, waxaana uu si weyn uga dhex muuqday kulankii ay guusha ku soo gaareen garoonka St James’ Park iyo kulankii ay wajaheen Clarets, halka qaab ciyaareedkiisu uusan ahayn mid xun ciyaartii Liverpool.
>- Dani Ceballos kaasoo kulankiisii ugu horreeyey guriga kooxdiisa ciyaaray ciyaartii ay wajaheen Burnley ayaa laftiisu sameeyey bandhig ilqabad leh, waxaana xiddiga xulka qaranka Spain uu sameeyey kulankaas labo caawin.
>- Matteo Guendouzi ayaa buuxinaya afarta xiddig ee abaal-marinta bisha Arsenal u sharraxan waxaana wiilkan timaha weyn uu bandhig xoog leh ka sameeyey dhammaan kulammadii ay ciyaartay Arsenal horyaalka Premier League bishii Agoosto.
Ciyaaryahanka ku guuleystay abaal-marintan ayay kooxda Gunners ku dhawaaqi doontaa maalmaha yar ee soo socda.
🗳 Don’t forget to cast your vote for our Player of the Month!
🤔 Who will you choose?